I-Angina: ii-pathogens, imithombo yokhusulelo, iindlela zokuhambisa, iimpawu
Ikwindla ifikile. Ukunyameka, utshintsho olubukhali kummandla weqondo lokuhlala, ukufudumala okuphezulu - zonke ezi ziyimfuneko zokuphuhliswa kwezifo ezahlukahlukeneyo. "Iindwendwe" eziqhelekileyo zihlala zihamba, ziqhaqhazela kwaye zibuhlungu, zihlala zihamba ezinsukwini ezimbalwa. Kodwa ngamanye amaxesha obomvu emqaleni uya kuphuma kwisimo esingenakubungozi kwisifo esiyingozi kakhulu-i-angina. Ngoko, umqala womzimba: izifo, izifo zentsholongwane, iindlela zokusasazeka, iimpawu - isihloko sesincoko namhlanje.
U-Angina ukuvuvukala kweetoni. Iifoni ezisuka kwimbono yezokwelapha ziyi-lymphatic formations of different size - ukusuka kwelitye elimnandi kwiqanda le-pigeon. Zifumaneka kumacala omabini e-larynx, kwaye kwicandelo lesiphambano zifana kakhulu neelymodes. Zineendawo ezingalinganiyo kunye neendawo ezixhomekeke kuzo. Iitoni zidlala indima ebalulekileyo emzimbeni, ilawula izinga le-lymphocytes egazini kunye nokunceda ukulwa namanye ama-microorganms. Ngokukhawuleza ukuba inqanaba leebhaktheriya liyakwanda - bavuke, banike umqondiso wokuthi umzimba usuleleke.
Kuyaziwa ukuba usana olutsha luba neetoni ezine emlonyeni. Amabini azo anamahlunu, angabonwa kwicala elingaphakathi lomqala, okwesithathu - i-neophlingal tonsil iyanyamalala kunye nexesha njengoko umntwana ekhula. Inkqubo eyenzeka phakathi konyaka wesithandathu neshumi elinesibini incike kwiimpawu ezithile zomntwana. Kwaye okwesine yintlanzi yeelwimi, efumaneka kwisiseko seelwimi. Kungaba "ikhaya" apho izifo zesifo - iindidi ezincinci kunye neemveliso zenguqu yazo - zihlala zingena emzimbeni. Le ngygdala ihlala isisifo sezifo ezininzi kunye nokwakhiwa kobuzwe obungabonakaliyo kunye nolwazi oluthile lomzimba. Kwakhona, iingcali ziyabona njengesizathu sokuqala kwe-tonsillitis engapheliyo.
Enyanisweni, isigama sonyango, i-tonsillitis enzulu (ukusuka kwisiLatini - i-tonsillitis: "tonsil" - tonsil kunye "inis" - ukuvuvukala). U-Angina sisifo esichengeni sisifo se-tonsil, esichazwa ukuvuvukala kunye ne-lymph nodes ekhulisiweyo. Eyona nto iboniswe rhoqo kwiinyanga ezibandayo zonyaka kwaye iziganeko ziphezulu kunazo zonke abantwana abasusela kwiminyaka emi-3 ukuya kweyesi-7, kuba abanaso isistim sokuzivikela kakuhle.
Imiqondiso yempawu yesifo somqala
umqala omninzi, ukuvutha nokucaphuka;
Ukwandiswa kweetoni, i-plaque ngendlela ye-mucus emhlophe kwiimbumba zazo;
ubunzima bokuphefumula okanye ukugwinya, ngakumbi kubantwana abancinci;
intlungu kwiimisipha kunye namalungu;
ukuphefumla kakubi kunye nokungafuni ukutya;
Imithombo yesifo kunye neendlela zokudlulisa umqala wengqondo
Ekubeni kwimiba engaphambili, i-angina inokudluliselwa kalula kwi-carrier ye-virus okanye isifo se-bacteria. Ezi zinto zingabandakanya: ukukhulelwa komzimba (ukuzalwa komntwana okanye ukufumana), ukudala imeko efanelekileyo yokuphuhliswa kwe-angina pectoris, izinto ezahlukeneyo zendawo, ezifana nokudibanisa kwamanzi, apho umntu enyanzelekile ukuba aphefumule ngomlomo. Ngamanye amaxesha imithombo yokusuleleka isifo sokungcola. Ukungcola, uthuli, igumbi elingenalutho - konke oku kunokuba negalelo ekuphuhliseni i-angina. Unokukhonza inkonzo embi kunye nokutya okungafanelekanga - ukutya okuphantsi kwiprotheni, iivithamini kunye neemaminerali. Nangona kunjalo, iindlela eziqhelekileyo zokusasazeka komqala wengqondo ziyaxhamla kwaye zidibene. Isizathu se-angina sinokuba yi-streptococci kunye ne-staphylococci, ingaphantsi kancinci i-pneumococci, i-Frindlander bacilli kunye nabanye.
Iintlobo zesifo somqala
Kwiyeza, ezi zilandelayo iintlobo ze-tonsillitis (isisu somzimba) zisetyenziswa:
Umlomo wesifo somzimba ngenye yeendlela ezilula zesifo esibangelwa usulelo lwe-HIV. Ubonakaliswe intlungu emqaleni, umkhuhlane kunye nokukhwabanisa kweetoni kunye neetoni.
I-follicular angina-ebangelwa yi-fungi, ekwahlukana ngayo ibe yintlupheko kunye ne-ulcerative-necrotic. Efane ne-necrosis yeetoni, apho abanye babo baqala ukufa. Ubonakaliswe intlungu ebuhlungu kumguli.
I-vesicular (purulent) engena yinto ekhethekileyo ye-tonsillitis, ebonakalayo kubuninzi bee-vesicle ezincinci kwiitoni nakwi-palate. Ngokuqhelekileyo, ama-vesicles aqhuma, ashiya izilonda ezincinci emlonyeni.
Liliphi unyango olusetyenziswayo?
Kwi-tonsillitis eqaqambileyo ebangelwa yi-bhakteriya, kunjalo, kufuneka usebenzise i-antibiotics. Ngokuqhelekileyo oku kuyimfuneko yokonyango lwe-tonsillitis ye-ulcerative necrotic, kunye nesimo esiyinkimbinkimbi yesifo somqala. Ukusetyenziswa kwamachiza e-antibiotics kubaluleke kakhulu, nangona kunjalo, amanani e-antibiotics kufuneka amiswe ngumcebisi, kuba ukubonakaliswa kwamanyathelo enjalo kwimicimbi enjalo akufanelekanga. Kubalulekile ukuba uqale uqonde imbangela yesifo somqala, kwaye kufuneka uphathwe. Oogqirha batusa ukuba ngaphezu kwee-antibiotiki, i-antiseptics zendawo zimele zisetyenziswe ekunciphiseni umlomo wesihlungu (iipilisi ezisondezayo, i-sprays). Kubalulekile ngethuba lokugula ukutya umlinganiselo omkhulu wamanzi, kodwa isiselo akufanele sitshise. Iziphuzo ezivuthayo zichaphazela umsebenzi weetoni, ukuxubusha imithwalo yegazi, leyo nto leyo leyo ingakhokelela ekunyuseni ukusasazeka kosulelo. Musa ukulibala malunga neentshisi ezifakwe ngokutsha, izithambile ezizityebi kunye neemaminerali.
Iingxaki emva kokugula
Inkxalabo eqhelekileyo kunye neyona nto ingabonakaliyo kukuphuhliswa kwe-abscess. I-abscess efanayo iyavela emva nje kwe-tonsillitis. Kwiimeko ezininzi, izigulane zinempawu ezifana nesifo somqala kunye nomkhuhlane, nangona kungekho misonyo embi. Kodwa ngeli xesha ubuhlungu bunzima, umsebenzi wokugwinya uphazamiseka, i-lymph node zikhulisa kakhulu, zikhona iingxaki ngezwi kunye nemigxininiso. Ngelo xesha, kuyimfuneko ukususa i-pus, emva koko imeko yesigulane iphucula kakhulu. Ukuba awuthathi amanyathelo afanelekileyo, usulelo luya kwinqanaba le-absentalnogo. Oku kungabangelwa yi-tonsillitis ephawulekayo, iidraum ze-larynx, izifo zamazinyo, ukuvuvukala kweengqungquthela ze-salivary.
Ukongezelela, ezinye izifo zingahlakulela, ezifana nokuvuvukala kweendlebe zangaphakathi (i-otitis), i-lymphadenitis (ukuvuvukala kwee-lymph nodes kumgca wesihlunu esiphantsi nentamo), izifo ze-rheumatic, isifo sesifo se-kidney, i-osteomyelitis.
Yimfuneko nini ukusebenza?
Impendulo ayinakulinganiswa - nge-tonsillitis ephawulekayo, eye yawela kwifomu engapheliyo. Kungakhathaliseki ukuba izigulane ziyakwandiswa okanye cha. Kodwa isigqibo songenelelo olunjalo asixhomeki kuphela kwisifo esisodwa. Ngokuqhelekileyo, kufuneka uphando oluninzi, kuba iifoni ziyingxenye ebaluleke kakhulu yokuzikhusela komzimba. Ukongezelela, kwizifundo zebhubhoratri ziqwalasela into yokuba isifo sihlala unyaka omnye. Ngokomzekelo, ukuba i-angina iqhubela phambili ngaphezu kokuphindwe kabini ngonyaka, isigulane siphethwe ngumkhuhlane ophezulu, isifo esinzima somqala, i-tonsillitis, kwaye ukuba isiguli asinakuncedwa yi-antibiotics. Emva koko usebenziso luya kuba luncedo ngaphezu kweyonyango ephazamisayo.
Unokukwazi okuninzi malunga ne-angina-pathogens, imithombo yokhusulelo, iindlela zokusasazeka, iimpawu - kwaye ngezihlandlo zigula ngenxa yesi sifo esingathandekiyo. Kule meko, ulwazi alukhuseli ekukhuselweni, kodwa lunikeza ithuba lokujongana nalo. Ngendlela efanelekileyo kwaye unyango olufanelekileyo ngexesha lomqala wesifo awukwazi ukuba lunzima kwaye uhambe ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwemiphumo.
Iindlela zokunqoba iimeko ezixinzelelekileyo
Iingcebiso ezifanelekileyo kakhulu zempilo
Iimbangela zeentloko ezinzima
Sula umzimba weesxibisi uze ulahlekelwe isisindo
Ngaba ndiyakunqumla ukunyuka kwezinja?
Indlela yokufumana ngokukhawuleza xa kufika isifo?
Ngaba ndiyakhulelwa ngosuku lokugqibela lomjikelezo?
Oko abakwenzayo ngePasika: amasiko kunye nezithethe zemihla ngemihla
Indlela entsha yokutya okunempilo
I-Biography yomculi u-Ilya Oleynikov
Ikhukhi ze-chip chocolate